I-Suite Sandollar Alpacas AIRBNB
Kennewick, Washington, i-United States
Indawo esepulazini ibungazwe ngu-Nikki & Collins
Woza uhlale nathi epulazini lethu le-alpaca elisebenzayo lapho sikhulisa khona ama-suri alpaca angajwayelekile kanye nalezo zinja ezinkulu eziqapha imfuyo, iGreat Pyrenees! Uzohlala ngokunethezeka efulethini langasese le-studio eliseduze nesitolo. Le ndawo esanda kulungiswa izothatha abantu abadala abane.
Izivakashi zingavakashela amagceke bese zehla eduze kwe-"Fuzzy Wuzzy", Isitudiyo sethu Sobuciko Se-Fiber/Leather kanye nesitolo sezimpahla esidayisa izinto ezihlukahlukene ezenziwe ngezandla.
Uzothanda uphahla oluphezulu kanye nempahla ekhululekile "yesitayela sepulazi". Kukhona ikhishi elimangalisayo elinezinto zonke ezibalulekile kanye nefriji yobukhulu obugcwele kanye nohhavini we-microwave, lapho izivakashi zingalungisa khona ukudla okulula noma ukudla; kukhona newasha yesitaki esigcwele usayizi kanye nesomisi ukuze kube lula kuwe.
Sisemaphethelweni e-Kennewick, imizuzu emi-2 nje ukusuka e-Historic Downtown Kennewick lapho izinhlobonhlobo zezindawo zokudlela nezitolo zitholakalayo ukuze uzijabulise. Vele uhambe uye enyakatho ukusuka epulazini eliku-Washington Street cishe imayela elilodwa ukuya e-Kennewick Avenue bese ujikela kwesokunxele (entshonalanga). Indawo yokupaka emgwaqweni iyatholakala.
Ibungazwe ngu-Nikki & Collins
UNikki & Collins Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Kennewick namaphethelo